Fryer Saliid Bilaash ah ▷ Fikradaha iyo Fryers-ka Hawada ugu Fiican 2022
Fryer Saliid Bilaash ah: Fikradaha iyo Midkee la iibsanayaa
La cusbooneysiiyay 03/2021
Ma rabtaa inaad hagaajiso cuntadaada adigoon iska deynin cuntooyinka shiilan ee aad jeceshahay? Fryers hawada kulul waa doorasho wanaagsan oo kaliya aad heshay mareegta tixraaca iyaga ku saabsan.
Ha seegin hagayaashayada moodooyinka ugu fiican, waxaanu kuu sheegaynaa sida ay u shaqeeyaan, fikradaha kuwa hore u tijaabiyay iyo halka laga soo iibsado qiimaha ugu fiican online ee Spain.
INTA UGU RABSAN
Maxay yihiin kuwa ugu fiican hadda?
Fryers barbar dhig bilaa Saliid
Sida loo doorto iyo waxa la raadiyo?
Sidee u Shaqeeyaa Fryer-ka Bilaashka ah ee Saliidda?
Qiimaha Fryers Hawada Kulul
Waxa ay suuqa ku jireen dhowr sano hadda, laakiin waxaa weli jira dad badan oo shaki ka qaba qalabkan yar. Haddii aad halkan joogto, waa sababtoo ah waxaad xiisaynaysaa iyaga, laakiin ma hubtid waa maxay natiijada ay bixiyaan iyo haddii ay u qalmaan waxayna ku haboon yihiin gurigaaga. Sii wad akhriska iyo soo hel xogta ugu dhamaystiran iyo dhexdhexaadnimo
Waxaan jecelnahay inaan horumarino oo aan ogaano haddii aan ku caawinnay, markaa faallo kasta waa la soo dhaweynayaa, xitaa haddii ay muhiim tahay, na sii hal daqiiqo 🙂
➤ Isbarbardhigga Fryers-ka Saliid la'aanta ugu Fiican
Is barbar dhig si deg deg ah oo fudud si aad u aragto kala duwanaanshaha ugu muhiimsan oo go'aanso midka si fiican ugu habboon baahiyaha gurigaaga.
Sare loo qiimeeyay
Dhaqdhaqaaq 2 gudaha 1 XL
Hawada Fryer XL
➤ Waa maxay Fryer-ka Saliid la'aanta ugu Fiican ee Suuqa?
Go'aaminta kan ugu wanaagsan annaga naguma taallo, tan iyo markii Isticmaale kastaa wuxuu leeyahay mudnaanta taas oo go'aamisa doorashada.
Waxa aan kuu sheegi karno waa in moodooyinka ay ka sarreeyaan kuwa kale, ha ahaato waxqabadkooda, kharashkooda hooseeya ama inay haystaan ​​qiimaha ugu fiican ee lacagta.
Waxaan marka hore arki doonaa astaamaha ugu muhiimsan oo ka mid ah qalabka ugu fiican ee suuqa iyo hoos doorasho leh moodooyinka kale ee muuqda.
Sideen ku dooranaa?
▷ Diyaaradda Philips Airfryer HD9280/90
Qiimaha Philips HD9220/20
Fryer hawada XL ee qoyska: oo leh 6,2 l baaquli iyo 1,2 kg dambiil weyn oo ilaa 5 qaybood ah - 7 barnaamijyo cunto karin ah oo horay loo dejiyay oo leh shaashad taabashada
Bannaanka dibadda, hindise gudaha: Tignoolajiyada degdegga ah ee hawada leh nashqad xiddigeed oo gaar ah waxay abuurtaa wareegga hawada kulul ee ugu habboon ee cunnooyinka qallafsan iyo kuwa jilicsan
Nadiifin aan dadaal lahayn: Hawo-qaade oo leh qaybo badbaado leh oo meesha laga saari karo
✅ Tilmaamaha Hawo-Fryer-ka ee Muuqda
Awoodda 6.2 litir
2000 W awood
Farsamada Hawada Degdegga ah
Analog Time iyo Xakamaynta heerkulka
Qaybaha nabdoon ee weelka dhaqa
Jawaab celin wanaagsan oo ka timid iibsadayaasha
Inkasta oo ay jiraan dhowr nooc oo si fiican u iibiya, mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha iibka ee noocyada la aqoonsan yahay waa Philips HD9280 / 90 qoyska Airfryer.
Qalabkan, marka lagu daro sifooyinka caadiga ah ee qalabkan, ayaa leh Farsamada hawada degdega ah. Farsamooyin philips ah oo la ruqseeyay oo loogu talagalay in lagu helo cunto lagu kariyo si siman saliid aad u yar.
▷ Tefal ActiFry 2 gudaha 1
Tefal Actifry 2 1 qiimo ah
2-in-1 qaboojiyaha kulul ee gaarka ah Laba goobood oo wax lagu kariyo si loogu diyaariyo cunto dhan hal mar; waxaa ku jira saxan solay ah oo dheeraad ah si toos ah alaabta
Wareegga hawada kulul oo leh cudud wax kicinaysa oo wareegeysa Cunto shiilan oo khafiif ah oo la kariyey oo leh heerkul toos ah, waxay suurtagelisaa shiil yar oo dufan ah; heerkulka la hagaajin karo ee natiijada karinta saxda ah Laga bilaabo 80 ilaa 220 ° C
9 barnaamijyo toos ah oo toos ah shaashadda oo leh taabasho weyn; dib u dhac ku bilow ilaa 9 saacadood oo shaqada diirimaad hayso
Joogsi toos ah marka furka la furayo, dhammaan qaybaha (Makiinada ActiFry, solay, dabool) waa kuwo la rari karo iyo weelka weelka oo badbaadsan; saacad leh dhawaaqa signalka
Maxaa ku jira sanduuqa Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2in1, baaquli la saari karo iyo saxan dubay, daboolka la saari karo, qaaddada cabbirka, buug-gacmeedka isticmaale
Mug weyn oo ah 1.5 Kg: 4/5 adeeg
1400 W awood
Laba Aaga Wax-karinta
Barnaamijka Dijital ah oo leh LCD
4 Menus xafidsan
Dayactirka ilaa 10 sano
Hadda qaboojiyaha hawada leh laba aag cunto karinta iibka ugu fiican waa kan Tefal Actifry 2 in 1. Mid ka mid ah sifooyinka ugu caansan ee qaabkani waa suurtogalnimada karinta laba cunto isku mar.
Waxay kaloo kujirtaa a qaaddo wareeg ah oo cuntada ka saarta si toos ah ugana fogaato in uu gacanta ku sameeyo. Qiimaheedu waa xoogaa sarreeya, in kasta oo ay inta badan leedahay dalabyo leh qiimo dhimis wanaagsan.
Cecofry 4D Qiimaha
Fryer cusub oo cunto karis ah oo leh nidaam cunto karinta oo u oggolaanaya karinta in kor laga bilaabo, hoosta ama isku mar laga bilaabo kor iyo hoos, ku wareegsan cuntada 360º iyo u qaybinta kulaylka si siman.
Fryer otomaatig ah oo ku karsan saliid kasta oo leh 8 barnaamij oo horay loo dejiyay si ay u sahlanaato isticmaalka iyo fahamka: rootiga, rootiga, shiilan Faransiiska, foornada, buug-gacmeedka, digsiga shiilan, bariis iyo caano fadhi. Waxay ku daraysaa majarafad si toos ah ugu walaaqdo taas oo aad ku karsan karto dadaal yar iyo gacan, labadaba la saari karo.
Heerkulka la hagaajin karo shahaado laga bilaabo 100 ilaa 240º oo leh saacad saacad shaqaynaysa 5 ilaa 90 daqiiqo si loo kariyo dhammaan cuntooyinka suurtogalka ah. Waxaa ka mid ah menu si aad ugu kari karto caano fadhi heerkul ah 60ºC, la habeyn karo 0 daqiiqo ilaa 16 saacadood.
Waxay haysataa ikhtiyaarka ah in ay awood u leedahay in ay isku mar kariso laba suxuun oo isku mid ah laba heer oo mahadnaq ah, iyada oo ay awoodaan in ay isku daraan diyaargarow dhowr ah isku mar, samaynta wakhtiga ugu badan. Waxay leedahay baaquli mug leh oo 3-litir ah oo leh daahan dhoobo saddex lakab ah oo karsan kara ilaa 3,5 kg. baradhada, ka hortagga in cuntadu ay ku dhegto xagga hoose.
Waxa ku jira buug-gacmeed iyo buug-cunto si aad u kariso cuntooyin kala duwan si fudud oo leh 40 cunto oo aad ku barato sida loo kariyo qalabkan kacaanka ah iyo 8 cunto karis muuqaal ah oo dheeraad ah si aad u aragto qaabka muuqaalka sida ay u fududahay in lagu kariyo cuntadan. model shiilan. Waxay leedahay awood 1350 W si ay si hufan ugu karsato saxan kasta. Cabbirrada shiilanyadu waa: 31 x 39 x (47 cm oo leh gacanta) x 23 cm.
1350 W awood
Laba Aag Kuleyl oo Madaxbanaan
Jikada oo leh 2 heerar
Majarafad Rotary oo la go'i karo
Summada Isbaanishka ee Cecotec ayaa suuq geynaysa shiilaynta hawada kulul ugu dhammaystiran oo wax ku ool ah suuqa Ilaa hadda. Awoodeeda isku mar kari laba cunto, majarafad wareeg ah laga saari karo in lagu kiciyo cuntada iyo dhamaystiran xakamaynta dhijitaalka ah.
Laakiin taasi ma aha oo dhan, the Turbo Cecofry 4D waa ka kaliya waxa uu leeyahay laba kuleyl sii daaya. mid hoose iyo mid sare, kuwaas oo kala madax bannaan oo si wadajir ah ama si gooni ah loo hawlgelin karo.
▷ Shiilan saliid la'aan ah Princess
Qiimaha Aerofryer XL
Awoodda 3.2 Litir: 4/5 Adeegyada
Xakamaynta Dijital ah oo leh Barnaamijyo kala duwan
Haddii aad raadinayso model leh qiimo wanaagsan lacag waa inaad tixgelisaa shiilan caafimaad leh. Qiimaha iibkeeda caadiga ah waa ku dhawaad ​​125 euro laakiin inta badan waxay leeyihiin qiimo dhimis wuxuu ahaa 90 Euro. Waxaa jira laba nooc oo qalab ah oo leh kala duwanaansho yar oo aad ku arki karto falanqaynta aan ku samaynay shabakada.
Waa qalab leh tilmaamo guud oo wanaagsan ayaa soo dhawayn weyn ku yeeshay ka mid ah iibsadayaasha, kuwaas oo sidoo kale siinaya qiimayn wanaagsan. Awoodeeda celceliska ka sarreeya, awooddeeda iyo kontaroolada dhijitaalka ah oo leh barnaamijyo kala duwan.
Haddii aad doorato kama welweli doontid nadiifinta, sababtoo ah waxay ku habboon tahay in lagu dhaqo weelka weelka. Sida aad arki karto, waxba kama maqna, oo ay la socdaan fikradaha wanaagsan ee isticmaalayaasha waxay ka dhigaysaa mid taagan ka mid ah moodooyinka leh qiimaha ugu tayada wanaagsan.
Shiil Delight Qiimaha
Frying-jikada caafimaad leh oo leh 4 nooc oo cunto karin ah: shiil, dubay, dubay, dubay iyo maraqa; yaree baruurta iyo saliidda cuntadaada
800 gr oo ku habboon 3 ama 4 qof ilaa 500 g oo shiilan barafaysan oo lagu sameeyay 15 daqiiqo 200 C oo ay ku jiraan wakhtiga kuleylka
Fudud in la isticmaalo 30 daqiiqo saacada la isku hagaajin karo
Shiilid caafimaad leh oo la isticmaalayo wax yar ama saliid la'aan marka la shiilo, waxaad karin doontaa suxuun caafimaad leh oo macaan
Ku raaxayso cuntooyinkaaga shiilan ee caafimaadka qaba adigoon guriga ka buuxin ur
✅ Astaamaha Muuqda Shiil Delight
Awoodda 800 Grs: 2/3 Adeegyada
Alaabta la hagaajin karo 10 sano
Shiilan caafimaad qaba waa mid kale oo ka mid ah moodooyinka ku yaal ka mid ah qiimaha ugu fiican ee lacagta. Pvp-keedu wuxuu ku dhow yahay 150 euro laakiin tan ugu badan ayaa ah inay leedahay qiimo dhimis weyn oo ay tahay kudhowaad 100 euro.
Waa qalab dheellitiran oo leh tilmaamo ku filan si uu u guto shaqadiisa si fiican oo uu gaaro ku qanacsanaanta iibsadayaashaada. Waxa ugu cajiibsan waa iyada fududaato isticmaalka, design aad iyo waxa uu yahay loo dhisay inuu waarayo iyo in la hagaajin karo haddii uu xumaado.
▷ Cecotec Cecofry Compact Degdeg ah
Qiimaha Fryer Degdeg ah oo is haysta
✅ Tilmaamaha Degdegga ah ee Is haysta
1.5 litir: 2 xabbo oo max ah
900 W awood
Heerkulbeeg Analog ah iyo saacadeeyaha
Waxaa laga yaabaa in aliexpress aad ka heli doonto mid ka jaban, laakiin haddii aad rabto lacag yar ku bixi Fryer-ka hawada waxaanu ku talinaynaa Cecofry Compact Rapid by Cecotec. Dhab ahaantii ma badbaadin doontid wax badan adiga oo dooranaya china iyo qaabkan Shirkadda Isbaanishka waxaad haysataa damaanad laba sano ah.
Inkasta oo calaamaddu ay ku dhawaaqdo RRP ku dhawaad ​​​​75 euro, waxay badanaa leedahay qiimo dhimis taas oo dhigata qiyaastii 40 euro. Qiimahan ma jirto cudurdaar haddii aad rabto inaad wax ku karsato saliid ku dhawaad ​​​​oo aad tijaabiso tignoolajiyada hawada kulul.
▷ Maxay yihiin noocyada ugu fiican?
Hadda kuwani waa afarta nooc ee ugu fiican Fryers leh saliid yar oo loogu talagalay buug-yaraha ballaaran iyo haysashada moodooyinka ugu iibinta fiican gudaha Spain.
Haddii aad rabto inaad aragto qalabkooda ugu fiican iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkad kasta guji sawirka
Shiilanyada Saliida Tefal
➤ Fryers kale oo hawada kulul leh
Gal dib u eegistayada, iyaga waxaan si faahfaahsan u falanqeyneynaa moodooyinka kale ka muuqda suuqa Isbaanishka.
Waxaad ogaan doontaa faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka, fikradaha isticmaalayaasha kuwaas oo mar hore la kariyey iyaga iyo xagee ka iibsan kartaa kaaga qiimaha ugu fiican.
Saliida Vpcok Free Fryer
Saliid Lidl Free Fryer
Tefal Actifry Express Cunto fudud
Waa maxay shiilan aan saliid lahayn
Waxay noqotay mid ka mid ah qalabka guriga lagu guuleysto. Sababtoo ah Waxay diyaarin karaan dhammaan noocyada cuntooyinka, labadaba koorsada koowaad ama labaad iyo macmacaanka, laakiin saliid la'aan ama qaado oo kaliya. çTani waxay mahad iska leedahay inay la yimaadaan tignoolajiyad cusub oo la isku daray, taas oo ku saleysan xaqiiqda ah inay noqon doonto hawada ku wareegaysa heerkul sare iyo xawaare sare. Tani waxay ka dhigaysaa cuntadu inay yeelato dhammays adag oo aan naqaan, laakiin iyada oo aan lagu darin xaddi badan oo saliid ah.
➤ Waa kuwee Shiilan Saliid la'aan ah oo la iibsanayo?
Taladayadu waa in la iibsado Noocyada bixiya Adeegga Farsamada ee Isbaanishka, sida Tefal, Philips, Princess, Cecotec ... Maskaxda ku hay in ay yihiin kuwo xiran oo qalabaysan oo heerkul sare leh oo dhib badan, si aad u qadarin doonto inaad haysato meesha si aad u dayactirto ama meesha aad ka iibsanayso alaabta haddi aad u baahato. Iyada oo kor u kaca, noocyo badan oo cadcad ah ayaa soo baxay kuwaas oo aan haysan SAT iyo farqiga qiimaha ee moodooyinka Brand-ka qaarkood maahan mid aad u badan.
▷ Midkee ayaa dooranaya? Dhinacyada muhiimka ah
Qodobbada ugu muhiimsan Waxyaabaha ay tahay in maskaxda lagu hayo marka aad dooranayso hawo shiileeyaha waa:
Moodooyinka yaryar waa la iibiyaa, oo ku habboon lammaanaha ama keligood, iyo moodooyinka waaweyn ee qoyska oo dhan, markaa waa inaad xisaabta ku dartaa dooro awoodda ku habboon baahiyahaaga.
Way fiicantahay in aad soo iibsato fryer awood leh ka hor inta aanad gaabin, maadaama ay tahay wax isbeddel ku samayn kara tayada iyo waqtiyada karinta. Si kastaba ha ahaatee, awoodda sare ma aha calaamad muujinaysa in ay waxtar badan tahay, sababtoo ah waxay ku xiran tahay habka uu qalabku u isticmaalo awooddaas.
✅ Nadiifinta fudud
U fududee in la dhaqo Waa shay ka muhiimsan inta aad u malaynayso marka hore, haddii nadiifintu ay dhib badan tahay oo adag tahay, waxaa laga yaabaa inaadan u isticmaalin inaad iska ilaaliso wasakhaynta.
Qiimaha inta badan waa qodob lagu xisaabtamayo iib kasta, nasiib wanaag waxaad haysataa dhammaan qiimayaasha, xitaa noocyada ugu fiican.
✅ Reviews iibsadayaasha
Habka ugu wanaagsan ee aad ku heli karto wax iibsigaaga saxda ah waa inaad akhrido ra'yiga iibsadayaasha kuwaas oo mar hore isku dayay. Isku day inaad akhrido faallooyinka iyo kaliya ha eegin dhibcaha, waxay u janjeeraan inay si fiican u muujiyaan xaqiiqada.
✅ Qodobo kale oo Muhiim ah
Inkasta oo qodobada kor ku xusan ay yihiin aasaaska ugu muhiimsan, waxaa jira sifooyin dhowr ah oo si weyn u hagaajin kara waayo-aragnimada isticmaale iyo natiijooyinka karinta.
Heerarka karinta ee kala duwan
Iskoobka Wareega ee Saaridda Cunnada
Liiska hore loo dejiyay
Qaybaha Kulaylka ee kala duwan
Faa'iidooyinka shiilan saliid la'aan ah
Haddii aan hore u soo sheegnay in ay tahay fikrad ka badan guul, hadda waa in aan ogaanno faa'iidooyinkeeda ugu muhiimsan, kuwaas oo noqon doona kuwa ugu dambeyntii naga adkaan doona:
Cuntooyin ka caafimaad badan: Waa run in mararka qaarkood, xawaaraha nolosha ee aynu haysano awgeed, aynaan u joojin cunista cunto dheellitiran. Tani waxay keentaa in aan si degdeg ah u cunno cunno xun, iyada oo qayb weyn oo dufan ah u qaadanaysa jirkeena, taas oo u beddeli doonta kalooriyada. Sidaa darteed, shiilan-la'aanta saliidda ayaa gaari doona suxuun caafimaad leh, hoos u dhigista dufankaas in ka badan 80%.
Waxay kaa badbaadin doontaa wakhtiga jikada: Shiilan qoto dheer waa mid ka mid ah qalabka ugu dhaqsaha badan. Taasi waa, dhowr daqiiqo gudahood, waxaan ku heli doonaa suxuun diyaarsan oo macaan leh. Markaa waxay ka fogaan doontaa inaad wakhti badan ku qaadato jikada ama xakamaynta wakhtiyada. Tan iyo markii kiiskan, waxaad samayn kartaa barnaamijka lagama maarmaanka ah iyadoo ku xiran cuntada iyo waqtigeeda karinta.
Kharash tamar yar: Waa mid ka mid ah qalabka aan isticmaali doonin iftiin badan. Markaa kiiskan waxaan la barbardhigi karnaa foornada.
Ku dar saacada: Ha ka werwerin cuntada, sababtoo ah saacad-timer, ayaa lagu ogeysiin doonaa marka ay diyaar noqoto. Mana aha inaad ka walwasho heerkulka sababtoo ah badanaa waxay leeyihiin heerkulbeeye.
Aad bay u fududahay in la isticmaalo: Waa run mar kasta oo aan soo iibsanno aaladda waxaan ka baqeynaa in ay nagu adkaato isticmaalkiisa, laakiin xaaladdu sidaas maaha. Waxay leeyihiin kontoroolka dhijitaalka ah si ay u sameeyaan dejinta saxda ah.
Si fudud loo nadiifiyo: Maaddaama ay noqon doonto qalab aan si joogto ah u isticmaalno, waxaan u baahanahay inay fududaato nadiifinta waana ay tahay. Qaybaheeda waa laga saari karaa oo lagu dhaqi karaa weelka weelka. Inkasta oo haddii aad doorbidayso gacanta, waxaad ku samayn doontaa saabuun khafiif ah iyo isbuunyo.
Sagooti ur xun markaad wax karineysoFaa'iidada kale ee weyn ayaa ah in aadan ku yeelan doonin ur xun muddo saacado ah jikada ama qiiqa ka soo bixi kara noocyada kale ee qalabka.
Midkee wanaagsan, shiilan aan saliid lahayn ama saliid?
Waa run inay jiraan shakiyo badan, laakiin si dhakhso ah ayaan u tirtiri doonnaa. Sababtoo ah si guud marka aynu u hadalno waxa aynu caadaysteen ama aynu u barannay shiilan saliid. Laakiin iyaga waxaan haysanaa kharashka saliidda sheegay in ay sii dheer tahay xaqiiqda ah in aan isticmaali doono kalooriyo badan mana aha wax caafimaadkeena uu nooga mahadcelin doono. Sababtan awgeed, shiilan-la'aanta saliidda ayaa ka caafimaad badan waxayna noo oggolaadaan inaan abuurno suxuun aan dhammaad lahayn.
Markaa, dhammaan faa'iidooyinka ay leeyihiin, mar walba waan la joogi doonnaa iyaga, laakiin haa, inkasta oo natiijadu ay kaamil yihiin, waa run in Qaarkood ma helaan dhammayn adag sida kuwa saliidda ah. Kee baad door bidaysaa?
Muxuu samayn karaa shiilan qoto dheer oo aan saliid lahayn
shiil: Si macquul ah oo ku saabsan shiilan qoto dheer, waxaan rajeyneynaa inaan karsano shiilan. Hagaag, kiiskan looma hadhin. Waxaad ku raaxaysan kartaa qaar ka mid ah shiilan faransiis ah, iyo sidoo kale cuntooyinka rootiga leh sida croquettes ama steaks. Laakiin waa in ukunta la shiilay ay sidoo kale meel ku leeyihiin liiska shiilan qoto dheer oo aan saliid lahayn. Natiijadu waa ka sii yaab badan oo waad jeclaan doontaa.
Toast: Shaki la'aan, dhamaadka cunta kasta waxay wax badan ka sheegi doontaa dhadhankeeda waxaanan si adag ugu hoggaansami doonnaa dhadhankayaga. Sidaa darteed, haddii aad jeceshahay mid ka mid ah cuntada ka dhigaysa in yar oo qallafsan dibadda laakiin leh gudaha casiir leh oo siman, markaa waxaad sidoo kale ku sharad kartaa shaqadan shiilankaaga saliid la'aan. Tusaale ahaan, hilibka, tusaale ahaan, wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah maaddooyinka aadka ugu mahadcelin doona.
Dub: Waxaa jira marar badan oo aan aragno sida Shiilan aan saliidda lahayn ayaa wax yar la barbar dhigaya foornada. Sababtoo ah waa hawadu sidoo kale waxay ku wareegtaa xawaare sare si ay u duubto cuntada. Markaa waa mid ka mid ah hababka cunto karinta ee ugu caansan. Laakiin ma aha oo kaliya suxuunta ugu muhiimsan qaarkood, laakiin sidoo kale samaynta macmacaanka.
SidaDubidda ugu fiican ayaa horeba u jirtay marka ay timaado shiilan aan saliid lahayn. Haddii aad ka fekereyso diyaari suxuun taxane ah oo ah qaab duban ama barbecue ah, markaa waa inaad isticmaashaa shaqadan. Sababtoo ah natiijadu sidoo kale waa la yaab. Inkasta oo suxuunta ugu horreeya aysan ku noolaan hilibka oo kaliya, laakiin waxaad sidoo kale dooran kartaa kalluunka ama xitaa baradhada duban.
Cocer: Horay ayaanu u soo sheegnay in aanay saliid u baahnayn iyo marka aanu cunto karinayna, sidoo kale. Waa mid ka mid ah hababka cunto karinta ee ugu caansan. Sababtoo ah waxay ku saabsan tahay doorasho gebi ahaanba caafimaad qabta waana waxa aan jecelnahay. Intaa waxaa dheer, way ku habboon tahay in aan is daryeelno ama aan samayno qaar ka mid ah diyaarinta asalka ah. Wax kasta oo aad ka fikiri karto!
➤ Dib u eegista isticmaalaha hawada Fryers
Hubaal waxaad xiisaynaysaa inaad ogaato waxa isticmaalayaasha shiilaya hawada kulul yidhaahdaan. Inta badan fikradaha waa wanaagsan yihiin, inkastoo ay jiraan kuwa aan ku qanacsanayn.
Isticmaalayaasha aan ku qanacsanayn, inta badan, waxay ka cawdaan marka lagu shiilo saliid yar, cuntadu kuma sii ahaanayso sidii cuntada shiilan ee caadiga ah. Tani waa macquul, laakiin waa inaad maskaxda ku haysaa.
Waxaad akhrin kartaa qaar ka mid ah faallooyinka iibsadayaasha la xaqiijiyay ee faraxsan, ama tijaabada aad samaysay cuntadii:
"Waxaan jeclahay inay saliidda shaandhayso oo ay ku kaydiso hawada ilaa wakhtiga xiga. Kuleylku wuxuu u muuqdaa mid siman oo degdeg ah. Waxaan isku dayay cuntooyin kala duwan oo natiijadu had iyo jeer waxay ahaayeen kuwo wanaagsan. Wax walba waa qafiifsan yihiin oo si fiican u brown, saliidda la isticmaalayna uma eka mid xad dhaaf ah."
"Weligay hore uma aan yeelan weel qoto dheer, waxaana aad uga shakiyay sida ay u wanaagsan tahay, ama sida ay u wasakhaysan tahay. Shaygani waa weyn yahay! Waxaan ku sameeyay baalal. Qaybta ugu fiican waa sida ay u fududahay in la kaydiyo oo dib loo isticmaalo saliidda. Nidaamku gabi ahaanba waa ka nadiif wasakh. Nadiifinta aad bay u fududahay maadaama dambiisha shiilan, baaquli iyo dusha sare ay fududahay in la saaro lana dhaqo."
"Shiiliyahani wuxuu xalin doonaa dhibaato kasta oo aad ku haysato shiilan. Shiilitaanka necbayd sababtoo ah urta iyo wasakhda. Shiilan qoto dheer ayaa ah mid sahlan in la nadiifiyo sida loo isticmaalo oo lagu rido mashiinka weelka. Qaybta kaliya ee aan geli karin weelka weelka waa qeybta kuleyliyaha, kaas oo si fudud loogu nadiifiyo saxanka dhexdeeda. Sifeynta saliidda si fiican ayey u shaqeysaa oo ma abuurto wasakh, waxaan si toos ah uga shiilay cuntada barafaysan qaboojiyaha, baradhada, digaaga, iwm. "
"Aad u fiican! Waxay u baahan tahay khibrad yar si loo dejiyo wakhtiga lagu shiilo si fiican.
Si buuxda uma shaqeyso saliid la'aan, laakiin way ka fiican tahay shiilan qoto dheer oo cimri dheer.
Waxaan jeclaan lahaa inay jiraan doorashooyin badan oo lagu dejiyo heerkul kala duwan. Dijital ahaan way fiicnaan lahayd, laakiin waxay ahayd hadiyad la yaab leh oo uu iga helay saaxiibkay, markaa ma caban karo."
▷ Gabagabo Mifreidorasinaoite
Fikradeena waa ikhtiyaar wanaagsan kuwa doonaya yaree saliidda cuntadaada iyada oo aan "shiilan" la wada bixin. Waxa kale oo ay noqon kartaa qalab guri oo wanaagsan kuwa jecel in ay wax ku karsadaan foornada, laakiin iyada oo faa'iidada ay tahay in ay ka raaxo badan tahay oo ay fududahay in la nadiifiyo.
Haddii aad iibsato adigoo u malaynaya in lagu shiilay si la mid ah moodooyinka caadiga ah way ku niyad jabin doontaaHaddii kale hubaal waxaad ku farxi doontaa iibka, sida isticmaalayaasha badankooda.
Haddi aanad ku qancin natiijada cunto karinta hawo kulul oo aad wax badan shiilayso, u fiirso Biyaha Fryer Movilfrit.
➤ Qiimaha Shiilanyada Saliiddu
COSORI Fryer oo aan lahayn ... Eeg astaamaha 79.856 Fikradaha Eeg heshiiska
4,5L Saliid Fryer bilaash ah Eeg astaamaha 158 Fikradaha Eeg heshiiska
Aigostar Cube - Fryer qoto dheer ... Eeg astaamaha 2.550 Fikradaha Eeg heshiiska
Cecotec Fryer oo aan lahayn ... Eeg astaamaha 262 Fikradaha Eeg heshiiska
COSORI Fryer oo aan lahayn ... Eeg astaamaha 11.075 Fikradaha Eeg heshiiska
COSORI Fryer oo aan lahayn ... Eeg astaamaha 14.504 Fikradaha Eeg heshiiska
Ugu fiican	COSORI Fryer oo aan lahayn ...
Tayada qiimaha	4,5L Saliid Fryer bilaash ah
Waxaan jecel nahay	Aigostar Cube - Fryer qoto dheer ...
Cecotec Fryer oo aan lahayn ...
Qiimaha Fryers Saliidda Hoose waa guud ahaan ka sarreeya dhaqanka. Si kastaba ha ahaatee, noocyada kala duwan ee qiimaha ayaa ah mid aad u fiican, waxaanan heli karnaa moodallo la awoodi karo oo ku dhow 50 euro, xitaa kuwa ugu qalabaysan oo ku dhow 250 euro.
Inkasta oo RRP uu ku sarreeyo moodooyinka qaarkood, inta lagu jiro sanadka waxaa inta badan jira dalabyo yar oo qiimo dhimis fiican leh dhammaan noocyada kala duwan. Waxaad hadda arki kartaa dalabyada ugu fiican adiga oo gujinaya badhanka.
Black Friday Saliid Fryers Free
▷ Maxay yihiin iibiyeyaasha ugu fiican?
Liisaska si toos ah ayaa loo cusboonaysiiyaa 24-kii saacadoodba iyadoo leh amazon spain beellers
Iyada oo la dhimayIibka ugu sarreeya
4,5L Saliid Fryer bilaash ah
Aigostar Cube - Fryer qoto dheer ...
▷ Halkeed ka iibsan kartaa shiilayaha cuntada?
Waxaad ka iibsan kartaa shiilankaaga caafimaadka leh dukaamada jirka ama dukaamada internetka, halkaas oo aad ka heli doonto noocyo badan oo kala duwan. Dabcan, waxaad kaliya ka heli doontaa qalin qalin ah ee lidl, mar walbana lama heli karo.
Iibka internetka waxaan si cad ugu talinaynaa Amazon, taasoo kasbaday kalsoonidayada iyo tii macaamiil badan sannadihii u dambeeyay. Hubaal inaad taqaan ganacsiga e-commerce, laakiin haddii kale, waan kuu sheegi doonnaa sababaha ay u tahay mid ka mid ah fursadaha ugu fiican:
Noocyada iyo moodooyinka kala duwan ee weyn
Sicir wanaagsan iyo dalabyo joogto ah
Degdeg ah oo raqiis ah
Suurtagalnimada soo noqoshada
Laba sano oo dammaanad sharci ah
Fikradaha iibsadayaasha kale
Laakiin waxaa jira meelo badan oo aad ka iibsan karto shiilan aan saliid lahayn:
Amazon: Sidaan sifiican u ognahay, Kooxda iibka ee internetka ayaa leh dhammaan noocyada shiilan-la'aanta saliidda. Markaa waxaan heli karnaa noocyo kala duwan, astaamo iyo wax kasta oo aad ugu baahan tahay baahiyahaaga maalinlaha ah. Sidaa darteed, ka mid ah noocyo badan oo kala duwan, waa run in qiimayaashu sidoo kale kala duwanaan karaan, taas oo kuu badbaadinaysa qanjaruufo wanaagsan iibsashadaada.
Maxakamada Ingriiska: Noocyada waaweyn sidoo kale waxay ku kulmaan El Corte Inglés. Markaa waxaan helnaa moodooyinka aasaasiga ah, laakiin sidoo kale marmar-iibiyeyaasha ugu wanaagsan xagga cabbirka ama wararka. Sida qiimaha, waxaad sidoo kale heli kartaa qiimo dhimis ka badan kan kale, iyadoo ku xiran moodooyinka.
Lidl: Lidl supermarket Tallaabo kasta ayay nagu yaabaysaa. Sababtoo ah qalab sidan oo kale ah ayaa sidoo kale ku jira buug-yaraha waqti ka waqti. Friyaha hawada noo soo dhaweeya ayaa leh wax kasta oo aan u baahanahay si ay noogu darto iyada. Runtii waa raqiis oo fududahay in la isticmaalo. Laakiin maaha nooceeda kaliya, laakiin sidoo kale waxay soo bandhigtay nooc kale oo hawo kulul ah, oo leh 9 ikhtiyaar oo ku yaal 1. Laba ikhtiyaar oo qumman si ay u awoodaan inay ku hagaajiyaan baahiyadeena.
isgoyska: Xaaladdan oo kale, doorashooyinka ugu fiican ayaa sidoo kale ah kuwa aad heli doonto. Shiilan-la'aanta saliidda waa mid ka mid ah qalabka ugu iibinta badan ee boggiisa iyo marka lagu daro, waxaad sidoo kale ku raaxaysan kartaa qiimo dhimis noocyada caanka ah ee caanka ah. Laga soo bilaabo moodooyinka is haysta ilaa kuwa kale ee ballaadhkoodu yahay foornada. Qiimayaashu way ku kala duwanaan doonaan dhamaantood laakiin waxaad weli heli doontaa doorashooyin la awoodi karo.
CecotecSummada Cecotec wax yar ayuu u koray. Niche ayaa laga sameeyay mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la codsado, iyada oo ay ugu wacan tahay alaabadooda waxay leeyihiin tignoolajiyada ugu guulaha badan. Sidaa darteed, arrin shiilan oo aan saliid lahayn looma hadhin. Kaliya gal website-keeda waxaad ka arki kartaa wax kasta oo ay ku siiso, ee xulashada ballaaran ee alaabta oo aan ahayn kaliya jikadaa, laakiin guud ahaan guriga iyo xitaa daryeelkaaga gaarka ah. Laakiin weli waxaa jira wax badan, sababtoo ah waxay sidoo kale ku siinaysaa xulashada cuntooyinka. Maxaa kale oo aan ku weydiin karnaa?
mediamarktMediamarkt sidoo kale waxay ku siinaysaa nooc aad wax ku ool ah. Isku soo wada duuboo, waxay ku saleysan tahay magacyo si fiican loo yaqaan oo leh a qiimo wanaagsan lacag. Waxaad dooran kartaa nooc aasaasi ah ama mid leh shaqadii foornada. Labaduba waxay kor u qaadaan cunto karintaada caafimaadka leh waxayna ku caawiyaan maalin kasta.
(Codadka: 7 Celcelis: 3.3)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah
81 comments on "Fryer without Oil: Opinions iyo Midkee la iibsanayaa"
19 / 08 / 2019 at 01: 49
Dherigaygu dhibaato marka ay hal daqiiqo dhaafto waxay i siinaysaa E1 maxay tani macnaheedu tahay
21 / 08 / 2019 at 08: 51
Hello. Waan ka xumahay inaan kuu sheego iyada oo aan la garanayn qaabka ay tahay wax aan macquul ahayn. Caadiyan E1 macneheedu waa qaladka koowaad waxaana lagu qeexaa buug-gacmeedka qaybta khaladaadka soo noqnoqda. Nasiib
09 / 07 / 2020 at 17: 02
Waxaan jeclahay shiilan Faransiiska, hilib doofaar, digaag iyo khudaar la dubay, laakiin sababo caafimaad awgood, iska ilaali saliid badan, sidaas darteed, ikhtiyaarka shiilan aan saliid lahayn, faa'iido leh, wax ku ool ah iyo beddelka maalinlaha ah ee karinta guriga.
Intaa waxaa dheer, si sahlan loo nadiifiyo oo loo badbaadiyo wakhtiga, waxaan ku karsannaa koorsada koowaad ee vitro iyo koorsada labaad ee fryer hawada.
Maxaa u wanaagsan? Hagaag, si fiican baad u garanaysaa.
09 / 07 / 2020 at 17: 04
Way fiicantahay oo hubaal way ka dhadhaminaysaa, haha. Waad ku mahadsan tahay ka qaybqaadashada salaan
09 / 07 / 2020 at 17: 33
Sidoo kale waan jeclahay iyaga, laakiin cuntadeydu way iga hortagtaa, in ka badan 1 sano ma cunin cunto shiilan. ???? Wax talo ah oo ku saabsan shiilan aan saliid lahayn? Mahadsanid
09 / 07 / 2020 at 17: 38
Hello Ana. Waxaad haysataa doorashooyin badan oo aad ka dooran karto shabakadda. Haddi ay miisaaniyadu fiicantahay waxaanu ku talinaynaa Tefal iyo hadii ay tahay amiirad adag ama moulinex khaanadaha iyo cecotec oo leh suuf walaaqaya iyo astaamo badan. salaan
09 / 07 / 2020 at 17: 51
Tefal ama COSORI?
09 / 07 / 2020 at 20: 58
Cosori waxay leedahay badeecooyin wanaagsan waana ikhtiyaar wanaagsan haddii aad doorbidayso moodooyinka khaanadaha. Dhibaatadu waxay tahay in aysan hadda jirin Sat gudaha Spain. Ikhtiyaarka wanaagsan sidoo kale waa Tristar, oo ka tirsan isla kooxda Princess, ee Nederland. Salaamu calaykum
18 / 07 / 2020 at 21: 49
Cuntada aan ugu jecelahay in lagu shiilo qoto dheer waa squid
13 / 07 / 2020 at 15: 08
Saxanka shiilan ee aan ugu jecelahay waa shiilan faransiis ah.
14 / 07 / 2020 at 12: 28
Saxanka aan ugu jecelahay in aan shiilo waa croquettes.
15 / 07 / 2020 at 20: 10
Cuntada aan ugu jecelahay waa faraanti basasha iyo ulaha hake. Oh iyo weliba digaagga digaagga.
Waxaan jeclaan lahaa inaan haysto shiilan qoto dheer oo sidan oo kale ah si aan u kariyo caafimaad badan oo sahlan.
Clara ee Heras
16 / 07 / 2020 at 09: 01
Saxanka shiilan ee aan ugu jecelahay waa shiilan-cod
17 / 07 / 2020 at 11: 04
Ulaha digaaga basbaaska leh. Iyo miraha la qalajiyey. Waxaan akhriyay qaar ka mid ah qaboojiyaha hawada oo yeelan kara shaqadaas
20 / 07 / 2020 at 00: 10
Waxaan jeclaan lahaa inaan kariyo digaag iyo jajabyo caafimaad qaba!
11 / 08 / 2020 at 13: 34
Shiilan aan jeclahay waa khudaarta ku jirta tempura.
20 / 07 / 2020 at 11: 46
Saxanka aan ugu jeclahay shiilan waa digaag iyo gaar ahaan baalasha.
20 / 07 / 2020 at 11: 57
Qaar ka mid ah chopitos ama qaar ka mid ah xargaha.
30 / 07 / 2020 at 19: 36
Kaama daalin doono cunista qaar ka mid ah tequeños macaan oo ay ka buuxaan farmaajo (waxay yihiin kuwa caadiga ah ee Venezuela waana la shiilay), haddii aan ku guuleysto fryer-ka waxaan kugu martiqaadayaa inaad guriga ku cuntid.
31 / 07 / 2020 at 10: 58
Haha, taasi waxa loo qaadan karaa laaluush. nasiib
20 / 07 / 2020 at 12: 09
Hello!! Saxanka shiilan ee aan ugu jeclahay: baradhada, basbaaska padron, anchovies, durbaanka digaagga, baalasha digaaga… .. Waxaan jeclahay kuwa shiilan!
20 / 07 / 2020 at 21: 28
Cuntada aan jeclahay waa shiilan faransiis ah
23 / 07 / 2020 at 10: 16
Cuntada aan jeclahay waa baalasha digaaga oo shiilan oo shiilan.
23 / 07 / 2020 at 16: 08
Durbaannada digaaga waa macaan.
23 / 07 / 2020 at 16: 11
Waxa aan aad u jecelahay waa naasaha la dubay, iyo baradhada shiilan iyada oo aan si weyn loo qooyay saliid.
24 / 07 / 2020 at 18: 16
27 / 07 / 2020 at 03: 27
Sidee u dhadhan fiican yihiin shiilan iyo karootada french iyo haddii dusha laga sameeyo baruur la'aan, way ka sii badan yihiin.
29 / 07 / 2020 at 18: 10
Way adag tahay in la doorto midka la shiilay ee la jecel yahay, laakiin waxaan jeclahay baalasha digaagga ee gudaha ku jira oo ruuggan. Ahhhhhhmmmm
29 / 07 / 2020 at 18: 43
Qaar ka mid ah baradhada shiilan oo leh ukun iyo ham, ukun iyo chorizo ​​​​, oo leh ukun iyo pudding madow; aan helno baradhossssssssssss… ..farxad !!!!
29 / 07 / 2020 at 19: 04
Croquettes waa fasalka koowaad, delicious !!!
30 / 07 / 2020 at 10: 53
Waxaan jeclahay baalasha digaaga shiilan-la'aanta ah ee shiilan. macaan!!! Digaagga khudaarta leh, croquettes, iwm ayaa sidoo kale aad u wanaagsan. Aynu eegno haddii uu nasiib jiro oo aan helo barbaraha, taydu si fiican uma socon oo maalmahan mid ka mid ah ayaa istaagaya shaqada.
30 / 07 / 2020 at 10: 54
Waa hagaag, nasiib wacan. salaan
30 / 07 / 2020 at 17: 47
Saxanka shiilan ee aan ugu jecelahay waa baradho shiilan oo ukun leh.
30 / 07 / 2020 at 14: 13
Hagaag, aniga ahaan fryer-ka qalinka ah waa mid raaxo leh oo qiimo fiican leh
Saaxiibkay wuu hayaa oo waan ka helay
waan iibsan doonaa
30 / 07 / 2020 at 14: 18
Qaabkii ugu dambeeyay waa mid aad u dhameystiran, dhibaatadu waa helitaan maadaama ay isla markiiba iibinayaan. Shabakadda waxa aan ku haynaa beddelaadyo isku mid ah oo wanaagsan ama ka wanaagsan, iyo xitaa qaab la mid ah. Nasiib wacan iibsashada.
30 / 07 / 2020 at 16: 44
Cuntada aan ugu jeclahay… feeraha BBQ iyo quesadillas?
Aad u dhadhan fiican leh laakiin lama shiilan, haha. Nasiib
30 / 07 / 2020 at 17: 09
Hi, waxaan jeclahay ham iyo shiilan ukunta, yum yum
30 / 07 / 2020 at 17: 39
30 / 07 / 2020 at 17: 41
Milanesas leh basbaaska shiilan iyo baradhada waa saxan shiilan ee aan ugu jeclahay.
30 / 07 / 2020 at 17: 42
Omelette baradho leh digaag la shiilay, macaan! Iyo gaar ahaan xagaaga si aad u qaadato dalxiis.
30 / 07 / 2020 at 22: 05
Salaamu caleykum Saxanka aan jeclahay waa skewers. Xaaladdan oo kale, waan hubaa in aan jeclahay zucchini iyo aubergine sababtoo ah waa laba badeeco oo aniga iyo xaaskeyga aan cunno inta badan.
Waxaan saaka soo iibsaday shiilan, anigoo goor hore kacaya oo safaf galay. Haddii aad tagto saacad ka dib, ma jirto xitaa mid ka haray ...
Salaan qiimo leh. Robert
30 / 07 / 2020 at 22: 51
Saxanka aan jeclahay waa longaniza oo leh basbaas iyo shiilan faransiis ah.
30 / 07 / 2020 at 23: 57
Cuntada aan ugu jeclahay shaki la'aan… shiilan Faransiiska….
31 / 07 / 2020 at 10: 24
salmon aan ugu jeclahay shiilan
01 / 08 / 2020 at 05: 11
Cuntooyinka shiilan ee aan ugu jecelahay waa ukun, chorizo ​​​​iyo shiilan faransiis ah. Inkasta oo ay tahay in aan marar badan la cunin. ?
01 / 08 / 2020 at 17: 15
Waxaan inta badan ku cunnaa digaagga dufanka leh habka "Pilopi" iyo sidoo kale maraqa baradhada. Carruurtu way ku waalan yihiin iyaga... Laakin aniga iyo ninkayga waa in aan cunno dufan yar XDD waxaanan ka fikirnay in aan soo iibsano shiilan saliidda ah laakiin weli kuma qanacsanin sida ay u shaqeeyaan ...
04 / 08 / 2020 at 08: 57
Cuntada aan ugu jecelahay waa aubergines shiilan.
04 / 08 / 2020 at 10: 24
Waan ku faraxsanahay, hadda waxaan siinayaa mid hooyaday, cuntada aan ugu jecelahay waa digaagga dheer ee dhadhanka aan jeclahay, iyo keega liin.
04 / 08 / 2020 at 10: 42
Cuntada aan jeclahay waa croquettes, wax kasta oo ay yihiin. Way i waayaan...
04 / 08 / 2020 at 19: 37
Waxaan haystaa laba, khaanad iyo mid wareeg ah oo laga keenay Tefal aad ayaan ugu faraxsanahay labadaba waxaanan mid kale u raadinayaa gurigayga labaad
05 / 08 / 2020 at 00: 06
Saxanka shiilan ee aan ugu jecelahay waa calamari a la Romana.
05 / 08 / 2020 at 04: 56
Nuggets Digaag ee aan Jecelahay
05 / 08 / 2020 at 23: 52
Saxanka aan ugu jecelahay waa shiilan Faransiis ah oo leh basbaaska.
07 / 08 / 2020 at 12: 06
Dabcan iyo shaki la'aan ... croquettes.
08 / 08 / 2020 at 09: 08
Croquettes iyo ulaha kalluunka ayaa si fiican u soo baxa. Waxaad iska ilaalisaa saliid. Buskudkuna si fiican ayay u soo baxaan. Laakin dembi in aad wax yar qaadato.
08 / 08 / 2020 at 10: 33
Cuntooyinka aan jeclahay waa digaag toon, shiilan faransiis ah iyo aubergines.
08 / 08 / 2020 at 12: 13
Cuntada aan ugu jecelahay waa digaagga la shiilay oo sarreeya
08 / 08 / 2020 at 14: 51
Cuntada aan jeclahay waa mid aad u fudud: shiilan Faransiis !!
MONICA PASCUAL ku raaxayso
08 / 08 / 2020 at 20: 15
Cuntada aan jeclahay shaki la'aan waa digaag, waa macaan !!
08 / 08 / 2020 at 22: 41
Saxanka aan ugu jecelahay waa croquettes ay ayeeyday samayso
08 / 08 / 2020 at 23: 17
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku tijaabiyo prawns gabardine, squid a la romana, anchovies la marinay, iyo…. Waxay noqon lahayd wax lagu farxo in aan awoodo in aan cuno iyaga oo aan ka fikirin waxa ay igu kicinayaan?
09 / 08 / 2020 at 00: 01
Saxanka shiilan ee aan ugu jecelahay waa baalasha digaaga oo shiilan.
09 / 08 / 2020 at 01: 03
Waxa aan jeclahay in aan sameeyo waxa ugu badan waa baalasha digaaga oo leh basbaaska la shiilay, way macaan yihiin !!!
10 / 08 / 2020 at 17: 15
10 / 08 / 2020 at 18: 27
Hi, saxan aan jeclahay waa baqashii digaaga.
10 / 08 / 2020 at 18: 34
NUGGET LA FRIES FRENCH, cunnada aan jeclahay ee labadayda shayaadiinta yaryar
11 / 08 / 2020 at 12: 26
Faransiisku wuxuu shiilaa saliid la'aan, sidee u macaan iyo sida yar ee naaxinta !!!!!
11 / 08 / 2020 at 15: 23
Cuntada aan jeclahay:
Digaag rooti ah iyo shiilan faransiis ah.
11 / 08 / 2020 at 15: 24
11 / 08 / 2020 at 18: 47
Cuntada aan ugu jecelahay waa khudaarta qallafsan, cunto fudud ee chickpea la qalajiyey iyo, dabcan, shiilan jiis hilib doofaar ah kuwaas oo ah ILAAHAY.
12 / 08 / 2020 at 09: 57
Shiilan aan jeclahay waa baradhada; laakiin baradho aan saliid lahayn laakiin crunchis ah!
12 / 08 / 2020 at 16: 57
Cuntada aan ugu jecelahay waa shiilan iyo baalal Faransiis ah, waxaan jeclaan lahaa inaan sameeyo
12 / 08 / 2020 at 17: 27
Waxaan jeclahay baradhada iyo karootada
12 / 08 / 2020 at 18: 05
Saxanka aan ugu jeclahay sausages dhuuban oo la shiilay waa mid qallafsan oo aan dufan lahayn
12 / 08 / 2020 at 18: 44
Cuntooyinkaygu waa khudaar aan saliid lahayn iyo bass badeed la dubay
12 / 08 / 2020 at 19: 45
Cuntada aan jeclahay shaki la'aan waa dhammaan cuntooyinka qashinka ah, iyada oo ay ugu wacan tahay shiilan-la'aanta saliidda waxaad u cuni kartaa cuntadaas hab caafimaad leh.
12 / 08 / 2020 at 21: 57
Saxanka aan jeclahay maaha mid asal ah laakiin waa waxa aad hesho, shiilan Faransiis, haha. Eeg haddii aan bilaash uga dhigi karo shiilan aan saliid lahayn. salaan
13 / 08 / 2020 at 12: 06
Saxanka aan jeclahay, digaaga ku jira suugo curry, oo leh baradho iyo basasha.
14 / 08 / 2020 at 21: 06
Waxaan jeclahay kabuubyada guriga lagu sameeyo.
09 / 01 / 2021 at 19: 54
Maqaal aad u wanaagsan, waad ku mahadsan tahay caawinta !!